1 Ihe E Mere 28 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ihe E Mere n’Ụbọchị Ndị Eze nke Mbụ 28:1-21
Ihe Devid gwara ndị Izrel gbasara ụlọ nsọ ha chọrọ ịrụ (1-8)
Ihe Devid gwara Solomọn ka o mee na otú o kwuru a ga-esi arụ ụlọ nsọ ahụ (9-21)
28 Devid wee kpọkọta ndị isi Izrel niile na Jeruselem. Ndị isi ndị a bụ ndị isi ebo dị iche iche, ndị isi ìgwè dị iche iche+ na-ejere eze ozi, ndị isi otu puku otu puku ndị agha, ndị isi otu narị otu narị ndị agha,+ ndị isi ndị na-elekọta ngwongwo niile na anụ ụlọ niile eze+ na ụmụ ya nwe,+ nakwa ndị na-eje ozi n’obí eze na ndị dike gbasiri ike.+ 2 Mgbe ha zukọrọ, Eze Devid biliri, sị: “Ụmụnne m na ndị nke m, nụrụnụ ihe m chọrọ ikwu. Ọ dị m n’obi ịrụ ebe a ga-adọsa igbe ọgbụgba ndụ Jehova nakwa ebe Chineke anyị ga na-agbakwasị ụkwụ.+ M kwakọtakwara ihe ndị a ga-eji arụ ya.+ 3 Ma, ezi Chineke sịrị m, ‘Ị gaghị arụrụ m ụlọ a ga-anọ na-eto aha m+ n’ihi na ị lụọla ọtụtụ agha, gbuokwa ọtụtụ mmadụ* n’agha ndị ahụ.’+ 4 Ma, ọ bụ mụnwa ka Jehova bụ́ Chineke Izrel họọrọ n’ezinụlọ nna m ka m bụrụ eze Izrel ruo mgbe ebighị ebi.+ Ọ họọrọ Juda ka ọ bụrụ onye ndú,+ sikwa n’ụlọ Juda họrọ ezinụlọ nna m.+ A bịakwa ná ndị nna m mụrụ, ọ masịrị Chineke ka ọ bụrụ m ka a ga-echi eze Izrel niile.+ 5 Jehova enyekwala m ọtụtụ ụmụ.+ N’ime ha niile, ọ họọrọ Solomọn nwa m+ ka ọ bụrụ ya ga-anọ n’ocheeze Jehova na-achị Izrel.+ 6 “Ọ sịkwara m, ‘Ọ bụ Solomọn nwa gị ga-arụ ụlọ m na ogige m, n’ihi na ahọrọla m ya ka ọ bụrụ nwa m. Mụnwa ga-abụkwa nna ya.+ 7 Ọ bụrụ na ọ na-edebe iwu m, na-emekwa ihe m chọrọ,+ otú ọ na-eme ugbu a, m ga-eme ka ọchịchị ya sie ezigbo ike ruo mgbe ebighị ebi.’+ 8 Ọ bụ ya mere m ji nọrọ n’ihu ndị Izrel niile, bụ́ ọgbakọ Jehova, nakwa n’ihu Chineke anyị na-agwa unu, sị: Gbaanụ mbọ ka unu mata iwu niile Jehova bụ́ Chineke unu nyere, na-edebekwanụ ha, ka unu nwee ike biri n’ọmarịcha ala a,+ hapụkwara ya ụmụ unu ga-anọchi unu ka ọ bụrụ ihe ha ga-eketa ruo mgbe ebighị ebi. 9 “Solomọn nwa m, mara Chineke nna gị na-efe, jiri obi gị niile+ na-ejere ya ozi, na-aṅụrịkwa ọṅụ n’ozi ị na-ejere ya, n’ihi na Jehova na-enyocha obi niile,+ na-amatakwa ihe niile dị mmadụ n’obi.+ Ị chọọ ya, ị ga-achọta ya.+ Ma, ị hapụ ya, ọ ga-ajụ gị ruo mgbe ebighị ebi.+ 10 Ugbu a, Jehova ahọrọla gị ka ị rụọrọ ya ụlọ nsọ. Nwee obi ike, bidokwa ọrụ.” 11 Devid gwaziri Solomọn nwa ya otú ebe a ga-esi na-abanye n’ụlọ nsọ ahụ ga-adị,+ otú ọnụ ụlọ dị iche iche ga-adị, ma ọnụ ụlọ ndị a ga na-akwasa ihe, ma ọnụ ụlọ ndị ga-adị n’elu, ma ọnụ ụlọ ndị ga-adị n’ime, ma ụlọ ebe a na-ekpuchi mmehie.+ 12 Ọ gwara ya ihe ndị e si n’ike mmụọ nsọ gwa ya gbasara otú a ga-esi arụ ihe niile banyere ogige+ ụlọ Jehova, ụlọ ndị a ga-anọ na-eri ihe, ebe a ga na-edowe akụ̀ ndị ga-adị n’ụlọ ezi Chineke, na ụlọ a ga na-edowe akụ̀ ndị e doro nsọ.+ 13 Ọ gwakwara ya otú a ga-esi hazie ndị nchụàjà na ndị Livaị n’ìgwè n’ìgwè+ maka ozi ha na-eje n’ụlọ Jehova, gwakwa ya banyere arịa niile a ga-eji na-eje ozi n’ụlọ Jehova. 14 Ọ gwakwara ya otú ọlaedo a ga-eji mee arịa niile a ga-eji na-arụ ọrụ dị iche iche ga-aha n’arọ, nakwa otú ọlaọcha a ga-eji mee arịa niile a ga-eji na-arụ ọrụ dị iche iche ga-aha n’arọ. 15 Ọ gwakwara ya otú ihe ndị e ji adọsa ọkụ+ a ga-eji ọlaedo rụọ nakwa ọkụ* ha ndị a ga-eji ọlaedo rụọ ga-aha n’arọ, gwakwa ya otú ihe ndị e ji adọsa ọkụ a ga-eji ọlaọcha rụọ nakwa ọkụ* ha ndị a ga-eji ọlaọcha rụọ ga-aha n’arọ. 16 Ọ gwakwara ya otú ọlaedo a ga-eji rụọ tebụl a ga na-edosa achịcha a na-enye Chineke+ ga-aha n’arọ. Ihe ọzọ ọ gwara ya bụ otú tebụl nke ọ bụla na ọlaọcha a ga-eji rụọ tebụl ọlaọcha ga-aha n’arọ. 17 Ọ gwakwara ya otú ọlaedo a na-agwaghị agwa a ga-eji kpụọ ndụdụ, efere, na nnukwu iko ga-aha n’arọ. Ihe ọzọ ọ gwara ya bụ otú obere efere ọlaedo+ nke ọ bụla ga-aha n’arọ nakwa otú obere efere ọlaọcha nke ọ bụla ga-aha n’arọ. 18 Ọ gwakwara ya otú ọlaedo a nụchara anụcha nke a ga-eji rụọ ebe ịchụàjà insens+ ga-aha n’arọ nakwa otú ihe na-anọchi anya ụgbọ ịnyịnya,+ ya bụ, cherob+ ndị e ji ọlaedo kpụọ ga-aha n’arọ. Nku cherob ndị ahụ ga-agbasa agbasa kpuchie igbe ọgbụgba ndụ Jehova. 19 Devid sịrị: “Jehova duziri m, nyekwa m amamihe, mụ aghọta otú a ga-esi arụ ihe a niile,+ deekwa ha edee.”+ 20 Devid gwakwara Solomọn nwa ya, sị: “Nwee obi ike, dị ike, bidokwa ọrụ. Atụla egwu, atụkwala ụjọ, n’ihi na Jehova Chineke, bụ́ Chineke m, nọnyeere gị.+ Ọ gaghị ahapụ gị, ọ gaghịkwa agbakụta gị azụ.+ Kama, ọ ga-anọnyere gị ruo mgbe a rụchara ụlọ Jehova. 21 Lekwa ìgwè ndị nchụàjà dị iche iche+ na ndị Livaị+ ga na-eje ozi niile a ga-eje n’ụlọ ezi Chineke. I nwekwara ndị dị njikere ịrụ ọrụ, ndị nwere nkà n’ụdị ọrụ ọ bụla a ga-arụ,+ nakwa ndị isi na mmadụ niile,+ ndị ga-eme ihe niile ị gwara ha.”
^ Na Hibru, “wụfuokwa nnukwu ọbara.”
1 Ihe E Mere 28